Ukubukeka okuhle kakhulu kwamadoda ehlobo - Imfashini Yamadoda enesitayela | Amadoda aSitayela
Ukubukeka okuhle kakhulu kwabesilisa ehlobo
U-Alicia tomero | 25/05/2021 11:01 | imfashini, Amathrendi
Uma uyithanda imfashini futhi ulandela izitayela ezintsha zokubukeka okuhle kakhulu ehlobo, mhlawumbe kufanele ubheke konke okungahambelana nezingubo kulo nyaka. Intwasahlobo nayo igcwele izinsuku ezifudumele futhi sihlala sibheja kumamodeli amasha sha ukukwazi ukuqala ukungena kwehlobo.
Amabhulukwe amade namahembe enemikhono emide ayaxoshwa futhi zonke lezo zingubo zasehlobo ziyazenzela indawo. Kulo nyaka sibheja ngemibala futhi… nangamahembe
1 Amajakhethi noma ama-blazers
4 Ama-shorts nama-bermuda
Amajakhethi noma ama-blazers
BangamaMelika futhi kunjalo, imikhono emide, kepha ngeke ilahleke ngaphakathi kwekhabethe lethu nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Thanda ukuwagqoka ngalobo busuku obupholile, kokubili okokugqoka nokuba yinhle. Izitayela zalo nyaka ziyefana cishe nayo yonke le minyaka edlule, ngokusikwa okufanayo kweSlim, okulungiswe emzimbeni nokumakwa okhalweni kancane.
Imibala ebeka isitayela ngamathoni ampunga noluhlaza okwesibhakabhaka, kusukela kokuncane kakhulu kuya kokumnyama kakhulu. Futhi ungaphuthelwa ijakhethi emnyama noma emhlophe, ekahle ukugqoka lapho ilanga liyoshona. Ama-blazers esikukhombisa wona anentamo ephakeme yamaphakethe namaphakethe asemaceleni, afanele ukugqokwa womabili nge-jean noma ngamabhulukwe okugqoka.
Amahembe nawo aqina, futhi anemikhono emifushane yiyona engcono kakhulu yokumelana namahora abucayi. Kunezimo, imibala namaphethini wawo wonke amaqembu nezitayela. Amahembe agqokwe kakhulu yimibhalo Uhlobo lwaseHawaii noma ngemidwebo engajwayelekile, Imivimbo namahembe kubuya kumhlophe ngokuphelele noma kunemibala ethambile ethambile.
Amahembe amancanyana wohlobo oluthile nemiklamo ebanzi igqokwa Njengehembe elisesithombeni, kufanele ligqokwe ngaphandle kwamabhulukwe nangamaphakethe ezinqenqemeni anechopho esifubeni. Ihembe elinemigqa likhululekile, linekhola le-bowling futhi ihembe lokuphrinta elinemibala linephakethe lesikhumba esifubeni kuphela.
Izikibha yingubo ekhethwayo ukugqoka ehlobo, cishe zonke izitayela zigqokile futhi singagcizelela ukuthi lezo ezizovuna kakhulu yizo ezinazo imibala egqamile, enemibala engathathi hlangothi, imibala ethambile nokuqokomisa Umbala we-Coral. Futhi ikakhulukazi omhlophe omningi. Kumele kuqashelwe ukuthi amahembe ahlabayo ahlanganisa kakhulu namabhulukwe amhlophe.
Izikibha ezithombeni ziyisibonelo salokho okungenzeka kuleli hlobo, isikibha esiluhlaza ngenye yazo ama-shades adonsa amehlo bazothanda kangakanani, futhi ukubukeka kwamatilosi yilokho okugqokiwe, ukubheja izikibha ezinemigqa enemibala enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka. Okunye ukubheja kungenye yamahembe onawo amalahle ithoni eluhlaza okwesibhakabhaka nobukhulu obukhulukazi, enentambo eyindilinga futhi yakhelwe ngephakethe lesikhumba esifubeni.
Sigqoke amabhulukwe amafushane ngokwedlulele amasizini ambalwa ukukhombisa imilenze, kodwa kulo nyaka Sesiyakwazi ukubona amamodeli anokusikeka emadolweni. Kukhona zonke izinhlobo, kusuka kuma-jean anama-rips ahambelana nawo futhi abalulekile isitayela sasemadolobheni, kwezemidlalo ebanzi ngezindwangu ezilula ezichaza okhalweni nangamaphakethe ezinhlangothini. Izibophezele ngemibala enamathoni athambile, anjengamhlophe, beige, amakhorali kanye nemibala eqinile njengombala omnyama no-navy blue.
Amabhulukwe esiwakhombisayo angamajini ama-denim futhi fit cut noma emincane, nge umphumela wokugeza okuningi nezinyembezi emilenzeni. Amabhulukwe alandelayo anemibala i-navy blue enezinto ezixutshiwe zikakotini nezelineni, futhi ngesici sokuba namapokhethi ama-patch anezinhlangothi ezinhlangothini zemilenze. Ingubo engezansi ilungele ukugqokwa nge-blazer futhi inezici ezifanayo ze- amabhulukwe amahle ngaphandle kwemicibisholo. Okulandelayo kune- ukubukeka kwesikhindi se-bermuda esinezinqe ezinwebeka kalula futhi kuthengiswe kakhulu ngokuba lula nokusebenziseka.
Yilezo zikhindi ezincane ezizogqokwa kuleli hlobo futhi zibukeka zi-tan. Izimpahla zokubhukuda, ngokungafani nezikhindi, zizoba mfushane. Ubheja kulokho Uhlobo oluncane lokusika nokuma, ukugqokwa ngamadoda angenandaba nokubukisa ngemizimba yawo futhi awavikele ngokunethezeka nangokwezocansi.
Kulo nyaka sibheje ngezimpahla zokubhukuda nabaningi ukuphrinta okunemigqa kanye nezimo zezimbali zaseHawaii. Kunemibala engenakubalwa eyethulwayo ngoba yonke iyajabula futhi imnandi. Izindwangu ezisetshenziswa kakhulu ezitolo ezinkulu ziyi lezo zokusetshenziswa kwesibili, zemvelaphi eyenziwe kabusha, Ukomisa okusheshayo nokuqinisekisa ukuvikelwa okuphezulu.
Ukuze ufunde kabanzi ngamathrendi wakamuva kuleli hlobo ungafunda i- «amamodeli wezimbadada ze-trekking ", okungcono kakhulu"izibuko zokuthanjiswa kwethrendi zamadoda»Noma uma uthanda ukuba semfashinini ngezinwele zakho, zithini«ukusikeka okuhle kakhulu".
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Ukubukeka okuhle kakhulu kwabesilisa ehlobo
Izinwele ezigundiwe zamadoda